हिन्दुहरुको दशै मंगोलहरुले बहिस्कार गर्दै
Created on Friday, 07 October 2016 14:02
हिन्दु सामन्ती चाड नलाद्न एमएनओको चेतावनी !
काठमाडौ, असोज २१ - धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा हिन्दुहरुको मात्र महान पर्वलाई अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरु माथि जवरजस्ती लादिएको भन्दै मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन केन्द्रीय सभाले कालो टिका लगाई बहिस्कार गर्न अपिल गरेपछि सामाजिक सञ्जाल देखि विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरुमा बहस छेडिएको छ ।
नयाँ संविधान मार्फत उल्लीखित धर्मनिरपेक्षको व्याख्या गराइ हिन्दु सामन्तीको संरक्षण गरेकाले प्रखर विरोध गर्खै आएको छ । हिन्दू सनातन संस्कारको मात्र रक्षा गर्नु पर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको संविधान र धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सामन्तीको प्रतिक दशैलाई महत्व दिएकोमा एमएनओ नेताहरुले बिरोध गरेका छन् ।
मंगोल पुर्खाहरुको बध गरिएकाले शोक मनाउनु पर्ने कुरा युग पुरुष डा. गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइको कारण दशै बहिस्कार गर्नु पर्ने आवाज पहिले देखि नै उठेको भए तापनि निरन्तरता पाउन सकेन । तर यसको नेतृत्व मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले गर्दै आएको छ ।
२० प्रतिशत विदेशी काला आर्यन बाहुन क्षेत्रीको मात्र विजय उत्सव भएको र मंगोलहरुको पतनको दिन कालो दिनको प्रतिक स्वरुप दशै जवर जस्ती लदाईएको भन्दै कडा भन्दा कडा अभियानकै थालनी गरिएको एमएनओले दावीका साथ भनेको छ । लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षको कुरा गरेर हिन्दुवाद लाद्ने काम भइरहेकोमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनले ठाडो विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
समाबेशीको नारा दिनेहरुले धर्मनिरपेक्षको आवरणमा हिन्दु एकात्मकवाद जवरजस्ती लादेको भन्दै यस्ता हिन्दु अतिवादीको खिलापमा अहिले देश व्यापी विरोध सभा गरी कालो टिका लगाई पुर्खाको बध गरीएकोमा शोक प्रकट गर्नु पर्ने एमएनओले निर्देशन जारी गरेको संगठनका कार्यवाहक प्रेसिडेण्ट बुद्धलाल मेचेले बताउनु भएको छ ।
हिन्दुहरुको चाड मंगोलहरुले मनाउनु आफ्नो पुर्खाहरुको अपमान गर्नु हो त्यसकारण अहिन्दु मूलबासी मंगोलहरुले बहिस्कार गरौं भन्दै प्रत्येक वर्ष आव्हान गर्दै आएको छ । तर बाहुन क्षेत्रीहरुले अझ व्यापक प्रचार गर्दै हिन्दुको मात्र चाडलाई दुुइ महिना अघि देखि नै प्राथमिकता दिएको छ । हिन्दुको मात्र चाडलाई १५ दिन सम्म सार्वजनिक विदा सरकारले दिएको छ ।
कंग्रेसका नेताले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै भएको दावी गरिरहेको बेला त्यो हिन्दु राज्य भन्दा फरक पनि छैन । धर्मनिरपेक्ष खोल मात्रै भएको सक्कली बनाउन एमएनओ लागि परेको बताइरहेका छन् । बाहुन क्षेत्रीको मंगोलहरुलाई तर्साउने हतियार धर्मनिरपेक्ष बनाएको छन् । मंगोलहरुको सस्कार धर्मलाई निमिट्यान्न पार्ने असली अस्त्र पनि वनेको छ ।
यसकारण हिन्दु दासत्वको जंजीर टोढ्न आव्हान गरिएको बताइएको छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भने सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने कुराको सवत्र आवाज उठेको छ । अहिन्दु मूलबासीहरुको चाड पर्वमा एक दिन करले सार्वजनिक विदा दिने तर हिन्दुहरुको चाडलाई सम्पूर्ण नेपालीको चाड भन्दै १५ दिन विदा दिनु हिन्दु उपनिवेशको पराकाष्ठा रहेको विश्लेषकहरुको निश्कर्ष छ ।
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको सांस्कृतिक अभियानको धेरैले समर्थन जनाउन थाले पछि अभियानले निकट भविष्यमा सफल हुने समेत बताउन थालिएको छ ।